‘बागीकै कारण पार्टीले हा¥यो’ - Tulsipur Online
‘बागीकै कारण पार्टीले हा¥यो’
Posted by News Desk | १६ मंसिर २०७६, सोमबार १४:११ |
घोराही १६ का वडाध्यक्ष लक्षिण बुढा मगरको मृत्यु भएपछि उक्त वडामा उपनिर्वाचन भयो । बुढा नेकपा निकट हुन् । तर त्यही क्षेत्रमा अहिले कांग्रेसले जित हात पारेको छ । उक्त वडामा नेकपाको बागी उम्मेदवारीकै कारण नेकपाले हार ब्यहोर्नु परेको छ। यसलाई नेकपाले कुन रुपमा लिएको छ, लगायतका बिषयमा तुलसीपत्रकर्मी अञ्जना चौधरीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाङका अध्यक्ष टिकाराम खड्कासंग कुराकानी गरेकी छिन् । –सम्पादक
घोराही १६ मा नेकपाले हार्नुको कारण के हो ?
नेकपाले हार्नुको कारण भनेको वागी उम्मेदवार हो । त्यो संगै समुदायिक विद्रोह पनि भयो । उक्त वडामा थारु र मगर जातिको वाहुल्यता भएका कारण धेरै जसो थारु र मगर संगठित भएर र भोट वागी उम्मेदवारलाई दिए । त्यही कारणले पनि नेकपाले घोराही १६ मा हार व्यहोर्नु परेको हो ।
आधिकारिक उम्मेदवारलाई नदिएर बागीलाई मत दिने अवस्था किन आयो ?
भोट कै कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि नेकपा कै धेरै छ । तर त्यहा वागी उम्मेदवारले ७२० मत ल्याउनु भएको छ । त्यो सबै भोट नेकपा कै हो, हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार प्रकाश केसी र जगलाल चौधरीको मत हिसाव गर्ने हो भने त ६१६ मतले नेकपाको मत धेरै हुन आउछ । त्यस कारण नेकपाले मत संरक्षण गर्न सकेन् भन्न मिल्दैन ।
यो हारलाई नेकपा दाङले कसरी लिएको छ ?
त्यसमा पार्टी, पद्धतिको कुरा आउँछ त्यही अनुसार पार्टी गम्भीर तरिकाले लागेको छ । अब चुनावपछि समिक्षा हुन्छ, त्यही अनुसार हामी अगाडी बढ्ने हो । यस अघि हाम्रो पार्टीले वागी उम्मेदवारलाई कारवाही गरिसकेको छ, अव वाँकीलाई केही समय पछि के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने छौं ।
Previousउत्तरको सपना पूरा गर्ने मौका पाएँ : बिमला